Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » I-US Capitol complex isusiwe ngenxa yesoyikiso sebhombu
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Isakhiwo seHHS Humphrey
Usongelo lwebhombu lwabikwa malunga ne-10 ekuseni kwi-HHS Humphrey Building kwi-block ye-200 ye-Independence Avenue edolophini ye-DC Eso sakhiwo sakhutshwa.
Iindlela ezintandathu ezijikeleze i-US Capitol kunye neSebe lezeMpilo eWashington, DC zivaliwe namhlanje.
Isakhiwo seHHS Humphrey siye sakhutshwa ngolwesithathu kusasa ngenxa yesoyikiso sebhombu.
Kukho ubukho bonyanzeliso lomthetho olukhulu malunga nesakhiwo sase-US Capitol kunye ne-HHS eWashington, DC.
Zonke iindlela ezijikeleze i-US Capitol kunye neSebe lezeMpilo lase-US eWashington, DC zivaliwe ngamapolisa namhlanje ngenxa yesongelo esibikiweyo sebhomu kwindawo.
Iindlela ezintandathu, ezibandakanya i-Washington Avenue kunye neSitrato sesithathu, zavalwa njengoko amapolisa aseCapitol aphanda isoyikiso sebhombu kwiSebe lezeMpilo laseMelika kunye neeNkonzo zoLuntu kwi-Independence Avenue - nayo yavalwa ngamapolisa.
Kukho ubukho bomthetho omkhulu kule ndawo. Amagosa oKhuseleko lweLizwe abonwa kwindawo evale iindlela kwaye isihlwele sabantu saphuma kwizakhiwo ezininzi ezikufutshane ngaphandle kwe-US Capitol.
USarah Lovenheim, uNobhala oNcedisayo we-HHS kwiMicimbi yoLuntu, ukhuphe le ngxelo ilandelayo:
“Ngale ntsasa bekukho isisongelo sebhombu esifunyenwe kwiSakhiwo saseHumphrey. Ngenxa yobuninzi bokulumkisa, saphuma kwisakhiwo kwaye akukho siganeko sichazwe. Sibeka esweni imeko ngokusondeleyo kunye ne-Federal Protective Service. Nayiphi na imibuzo inokubhekiswa kwiNkonzo yoKhuselo loMdibaniso. ”
I-HHS isebenza kunye ne-Federal Protective Service ukuvavanya imeko, ngokutsho kweLovenheim.
I-Capitol complex ibijolise kwinani elandayo lezoyikiso ukusukela ngoJanuwari xa ihlokondiba lamawaka abalandeli bowayesakuba nguMongameli uDonald Trump bahlasela iseshoni edibeneyo yeCongress.